Enda kune zvikamu, hongu kana kwete? | Ehupfumi Zvemari
Enda kune zvikamu, hongu kana kwete?
Misika yemusika wemari chikamu chemubhadharo wekambani iyo inosarudza kugovera pakati pevose vagovana kambani. Ndiyo yakatarwa uye yakavimbiswa mari iyo inogamuchirwa gore rega rega nevaridzi vemasheya neicho chokwadi chekuti uri muridzi wekambani. Iyi tsika inoitwa nemakambani akanyorwa pamisika yemari uye neimwe nguva. Uye izvo zvinoita sosi yemari yevatengesi vanozove nemari yakatarwa mukati meiyo kusiana uye zvisinei nekuchinja kwemitengo yavo mumisika yemari.
Kubva pane ino mamiriro ese akaunzwa nezvikwereti, zvinofanirwa kusimbiswa kuti uyu muripo kune vagovana uri mumamiriro akanaka kwazvo. Nekuda kwekuti, maererano neshumo yemaneja wehupfumi Janus Hendersom, mukati mekota yechitatu yakave zvakare nguva yakanaka kwazvo yekuvandudza zano rebhizinesi iri. Kusvika padanho rekubhadhara kuburikidza neiyi nzira yekuparadzira yakakura zvishoma kudarika 5% uchienzaniswa negore rapfuura, ichisvika pamunhu ari padhuze nemamiriyoni mazana matatu ezviuru zvemadhora.
Ndichiri mu España Iri izano rakashandiswa zvakanyanya nemakambani mazhinji akanyorwa pamisika yemari, ndiyo nzvimbo dzekutengesa muUS, Canada, Taiwan neIndia dzinotungamira kugoverwa kwemakota kwemubairo. Nechitarisiko, nechisimba chikuru, chemakambani eChinese anogona kuva chimwe chezvishamiso zvikuru mukugoverwa kwezvikamu kubva panguva dzino chaidzo. Chero zvazvingaitika, kudzoka kwekuchengetedza oscillates mumabhizimusi margins anoenda kubva ku2% uye kusvika padyo ne10% mune dzimwe nyaya.
1 Kugovaniswa: chii chaunofanira kuziva
2 Zviri nyore here kuenda kumubhadharo uyu?
3 Zvimwe zvikwereti zvinobatsira
4 Mitemo inofanira kuteverwa
5 Kubhadhara kwakanyanya muna 2018
Kugovaniswa: chii chaunofanira kuziva
MuEurope, ichokwadi kuti mazhinji emakambani akagovera zvikamu mukota yechitatu yegore, asi uine bakoat yaunofanira kufunga nezvayo kuongororwa kwayo. Icho hachisi chimwe kunze kwekubhadhara uku kwakawedzera mune ino nguva. Izvi mukuita zvinoreva kuti vagovani vadiki nepakati vanogashira imwe mari yekugara kwavo mubato. Mune chikamu cheinenge hafu yeperesenti poindi zvine chekuita nedzimwe nguva dzakapfuura. Iko makambani eSpain anoita basa rakakosha kwazvo kuzadzisa zvinangwa zvekubatsira muzvikamu.
Mupfungwa iyi, imwe yeanomiririra kesi ndeye yemagetsi Endesa iri basa rekugovera zana% yemubereko wayo. Nekuparadzaniswa kwemugove kunosvika pagore rezvibereko zvakavimbiswa gore rega rega pakati pe100% ne7%. Imwe yepamusoro-soro mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 8. Kuburikidza nebhizinesi rezvebhizinesi rinokurudzira uyu mubhadharo kune vanogovana pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi kufunga uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Zviri nyore here kuenda kumubhadharo uyu?
Mubvunzo waunofanirwa kuzvibvunza ndewekuti kana zvakafanira here pakupedzisira kuti uende kurudzi urwu rwemubhadharo muequities. Semapoinzi akanaka iwe unenge uine yakatarwa mubhadharo gore rega rega, chero chii chinoitika mumisika yemari. Kunyangwe mumamiriro ezvinhu ekusagadzikana kukuru uye kusagadzikana mumisika yemari. Kune rimwe divi, chishandiso chinoshanda kugadzira bhegi rekuchengetedza rakatsiga repakati nepakati. Nemitero pamusoro peiyo inopihwa neye akasiyana mabhengi zvigadzirwa (term deposits, kambani promissory manotsi kana yakakwira-yemubhadharo account). Mune akanakisa kesi, ivo vanokupa iwe zita neyakavanzika mubereko padyo ne2%.
Mukuwedzera, zvikwereti zvinogona kushandiswa kugadzirisa kurasikirwa kwaunogona kukudziridza mumisika yemari kubva panguva dzino chaidzo. Sechombo chekudzikamisa kana kungozvishayisa basa. Kwete pasina, kana iwe ukaona kuti zviito zvako zviri kudzikira 4% Iwe unogona kudzora kuita uku nechikamu chinogovera purofiti yegore pamusoro pe5%. Semuenzaniso, iyo inopihwa nemakambani emagetsi nemagetsi uye vamwe vari muchikamu chebasa.
Zvimwe zvikwereti zvinobatsira
Kune rimwe divi, uku kugoverwa kwakakosha pakati pevanogovana kunounza imwe nhevedzano yemabhenefiti iyo iwe yausina imwe sarudzo kunze kwekuziva kubva kune ese maonero maonero. Ehezve, imwe yeakanyanya kukosha ndeye kuchinjika kunopihwa nemamwe makambani kuti iwe ugone kuatora. Kuburikidza nehurongwa hwakasiyana senge iyo inoenda yakananga ku kudzoka kwezvikamu zvitsva kana kungoitira kuti vaende kuaccount yako yekutarisa panguva chaiyo mavanobhadharwa mari yavo. Iwe unogona kusarudza hunhu nerusununguko rwakazara zvichienderana nezano rauri kuzokudziridza uye zvakare chimiro icho iwe chaunopa semudyari mudiki nepakati.
Mupfungwa iyi, zvikamu hazvifanirwe kugadziriswa, asi zvinopesana, zvinogona kusiyana zvichienderana nemari inowanikwa nemakambani mugore rega rega. Zvinogona kunge zviri izvo zvavanogona kukanzurwa, zvachose kana kwechinguvaMuchiitiko chemamiriro ako ehupfumi, usaunze mukana uyu. Mune chero zviitiko zvacho, iwe unofanirwa kuziva kuti hadzisi dzakafanana nguva dzose uye kuti zvakajairika kuti zvisiyane, kunyangwe zvisingaite zvakanyanya, sezvaungaona nehunhu hukuru hweSpanish equities.
Mitemo inofanira kuteverwa
Chimwe chinhu chaunofanirwa kufunga nezvacho kubva zvino zvichienda mberi ndechekuti pane nhevedzano yemitemo inofanirwa kuremekedzwa kana uchigovera zvikamu. Muzviitiko zvese, iwe unofanirwa kuvaziva kuitira kuti usazowana kushamisika kusinganzwisisike nezve iyi yakasarudzika nzira yekugovana-purofiti. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvezvinhu zvakakosha kwazvo pamusoro pekugoverwa kwemari uku? Zvakanaka, chimwe chazvo chinogara muchokwadi chekuti kugovera kwambotaurwa kunofanirwa kubvumidzwa kuburikidza ne Musangano Mukuru, muchibvumirana pamafomu ekubhadhara uye nenguva iyo ichaitwa. Kana iwe uri mugovani wekambani, ivo vanofanirwa kutaura nezvazvo kwauri semugovani zvauri chaizvo.
Kune rimwe divi, iyo cast Izvo zvinofanirwa kuitwa zvakaenzana nekutora chikamu kwemumwe wako mune capital stock. Nekuti pane nzira dzakawanda dzekushandisa iyi mubhadharo kune wekugovana uye ndidzo dzinozoona mhedzisiro yaro inotevera. Usakanganwe kuti kwete mune zvese zviitiko ichagara yakafanana nekuti zvikamu zvinogoverwa zvinoshanduka uye zvinotendera mipiro mitsva kune zvazvinonyatso kureva. Kune rimwe divi, zuva rinofanirwa kutorwa chikamu chemugove rinofanira kutarisirwawo, kunyangwe hazvo chikamu ichi chakaunganidzwa munguva inotevera. Muzviitiko zvese, zvichave zvakafanira kuiswa munzvimbo yechitatu musati yashandisa kubhadhara kwayo.
Kubhadhara kwakanyanya muna 2018
Sekureva kweshumo yekota yemaneja wepasi rose Janus Henderson, kune akati wandei emakambani akabatsirwa zvakanyanya kubva mukugoverwa uku pane purofiti yemakambani munguva ino yakaongororwa. Kambani yemagetsi Iberdrola ndiyo yakabuda zvakanyanyisa kubva mukuwongorora uku, ichigovera anenge 1.300 bhiriyoni emadhora pakati pevashandi vayo vese. Inoteverwa kune imwe nhanho nezviito zve Banco Santander nemadhora chiuru nemazana maviri emadhora uye padanho rakanyanya zvikamu zveNATURGY, Repsol neEndesa, izvo zvave zvichitarisira kugovera pakati pemamirioni mazana masere nemazana mapfumbamwe emadhora rimwe nerimwe.
Mukati meichi chirevo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Spain yaive nyika yechipiri yeEuropean apo kugoverwa kwezvikwereti kwakanyoreswa kuwedzera kukuru kwegore-ne-gore mukati mekota yechitatu, kuseri kweItari chete, ne kuwedzera kweanosvika 19%. Ichi ndicho chimwe chezvikurudziro zvikuru zvakaenzana nenyika panguva ino, kunyangwe kudzikiswa kwakanyanya muripo uyu kwaonekwawo nemakambani epakati nepadiki anga achitarisira kubhadhara vatyairi mabhenefiti avakawana mugore rega rega remari.
Panyaya iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti gwaro remumwe muongorori wemisika yezvemari, saLofthouse, rinoratidza kuti gore rino ratichangosara rave kungochinja-chinja uye neimwe nzira zvakanyanya kunetsa kumisika yemasheya. Kunyangwe kwechinguvana kuvimba kuchiripo kuti iyo bhizimusi purofiti kukura ramba uchisimudzira kugoverwa kwemubhadharo uyu kune vagovana navo nenzira inoenderera uye pamusoro penzira dzese dzakadzikama kubva zvino zvichienda mberi. Pamusoro pehumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha maonero ekuona
Kwegore rino, fungidziro dzinoratidza kuti ivo vachange vachienderana neavo vekupedzisira makota e2018. Kunyangwe kuchiri kukakavara zvikuru kuti uvaongorore uye uwane kuongororwa kwakadzama kwazvo pairi. Hazvishamisi kuti zvinofungidzirwa kuti zvinogona kuwedzera muzvikamu pakati pe1% uye 2% n zvichienzaniswa negore rapfuura, chimwe chinhu chingabatsira varimi vanozvidzivirira zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Enda kune zvikamu, hongu kana kwete?